Iwu Ọrụ | Law & More B.V.
Iwu n'ọrụ bụ ịgbatịkwu iwu. A na-achịkwa ikike na ikike na nkwekọrịta ọrụ, ụkpụrụ ọrụ, nkwekọrịta mkpokọta, iwu na ikike. Ndị ọka iwu na-ahụ maka ọrụ Law & More tozuru oke ma mara maka iwu na ikike dị ugbu a.
> Ndụmọdụ gbasara iwu
> Bara Uru, Zuru oke ma Na-apụta
Okwu banyere ọrụ gbasara ọrụ na-enwekarị nsonaazụ na-emetụta ndị ọrụ na ndị ọrụ. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa na ọ bụrụ na ọka iwu ọkachamara na ọrụ ọfụma nyere gị aka, enyere gị aka. A sị ka e kwuwe, ezigbo ndụmọdụ gbasara iwu gbasara ọrụ ịnwe ọrụ nwere ike ikpebi ọdịnihu. O bu ihe nwute, enweghi ike igbochi esemokwu oge niile, dịka ọmụmaatụ, mgbe achufufu, nhazi ma ọ bụ anọghị ya n'ihi ọrịa. Kinddị ọnọdụ a adịghị njọ ma nwee mmetụta uche ma nwee ike imebi mmekọrịta ọrụ n'etiti onye were gị n'ọrụ na onye were ya n'ọrụ. Y’oburu na nsogbu si n’enwe nsogbu, Law & More ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịme ihe ziri ezi.
Law & More na-enyere aka azụmaahịa, ndị isi ọrụ, ndị na-ahụ maka ọrụ na ndị ọrụ na ngalaba nke iwu ọrụ. Ndị otu anyị na-enye ndụmọdụ gbasara iwu, ọ ga-agbagha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
• edetu na ịtụle nkwekọrịta ọrụ nzuzo nke onwe na mkpokọta;
• ịkwụsị ọrụ nkwekọrịta maka ndị were ọrụ na ndị ọrụ;
• enyemaka na esemokwu ndị metụtara ọrụ
• ịtọlite ​​faịlụ ndị ọrụ
• usoro nchụpụ
• okwu gbasara ụgwọ a na-akwụ ụgwọ
• elefughi anya
• okwu gbasara nkwekọrịta nkwekọrịta
• ezumike ma pụọ
• ọrịa na ịlọ ụwa
• ụgwọ ndị were n'ọrụ na ndị ọrụ.
Dị ka onye were gị n'ọrụ, ị na-ezute nsogbu metụtara iwu ọrụ gbasara ọrụ kwa ụbọchị. Kwesịrị ịbịpụta nkwekọrịta ọrụ, na-eche ihu na ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọrụ na-arịa ọrịa na esemokwu ọrụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ gị nwere ike ịhazigharị n'ihi ọnọdụ ahịa. Know mara nke ọma ikike gị na ọrụ gị? Ihe ọ bụla ị zutere, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka. E kwuwerị, ezigbo usoro iwu ọrụ ọrụ dị oke mkpa maka ụlọ ọrụ nwere ahụike.
Dịka onye ọrụ, ị ga-emebere iwu ndị ọrụ, ma ndị achụrụ ma achọpụtaghị ha. Chee echiche banyere ịnakwere na ịdebanye aha nkwekọrịta ọrụ, nkebi nke asọmpi na ikike gị na ọrụ aka gị n'oge ọrịa na mgbasa. Obi ga-atọ anyị ụtọ inyere gị aka n'okwu ọ bụla gbasara ọrụ iwu ịchọrọ maka ya.
Bara Uru, Zuru oke ma Na-apụta
E wezụga ndụmọdụ ndị ọkachamara, ị ga-achọkwa inweta ndụmọdụ iwu ngwa ngwa. Anyị maara nke a, anyị na-arụkwa ọrụ ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi. Anyị na-ahụ na anyị dị mfe iru ma nwee ike inye gị ndụmọdụ ndụmọdụ dị mma na nke ọkachamara. You nwere ike ịtụkwasị anyị obi maka ezigbo ndụmọdụ dị nkenke ma doo anya.
Wezọ anyị si arụ ọrụ bụ ụzọ doo anya ma dabere na idozi ya. Anyị na gị na-akparịta ụka iji kparịta banyere ikpe gị, ihe ndị ị chọrọ, ohere nke iwu na foto gbasara ego. Anyị ga-ekpebi atụmatụ ụzọ doro anya na gị na gị. A tụlere usoro nke ọ bụla, ka ị ghara inweta ihe ịtụnanya ọ bụla.